क्युबाको बारेमा जानकारी, तपाइँ क्युबाको बारेमा यी जिज्ञासु तथ्यहरू जान्नुहुन्छ? | Absolut यात्रा
क्यूबाको बारेमा जानकारी
सुसाना मारिया अर्बानो मटेओस | | क्युबा
जब तपाईं क्युबाको बारेमा सोच्नुहुन्छ, रमणीय परिदृश्य, सुन्दर समुद्र तट, हंसमुख र मैत्री व्यक्ति, साथ साथै सीमा शुल्क र क्युवाको परम्परा हामी मध्ये धेरैलाई पहिले नै थाहा छ। तर यो क्यारेबियन देश मा पहिलो पटक यात्रा छैन भने पनि, यो राम्रो विचार हो आफैलाई सूचित गर्न र यस अद्भुत टापु को बारे मा केहि बढी सिक्न। त्यसकारण, हामी तल सेयर गर्दछौं क्यूबाको बारेमा जानकारी र क्युबाको बारेमा केहि जिज्ञासु तथ्यहरु।
1 क्युबाको बारेमा जिज्ञासु तथ्यहरू
1.1 क्युबाको इतिहास
1.2 क्युवाको विकास
1.3 क्युबाको बारेमा अधिक जिज्ञासु तथ्यहरू
क्युबाको बारेमा जिज्ञासु तथ्यहरू
संक्षिप्त समीक्षा गर्न क्युबा को जिज्ञासु तथ्यहरु, हामी केहि पक्षहरू जस्तै ईतिहास, विकास र क्युबाको बारेमा अन्य जानकारीहरूमा तपाईंलाई ध्यान दिनेछ जुन हाम्रो लागि उपयोगी हुनेछ।
तपाइँलाई यो थाहा नहुन सक्छ, तर क्युबाको आधिकारिक नाम हो "क्युबा गणराज्य"जुन पालैपालो क्युबाको टापु, इस्ला जुभेन्टुड र धेरै साना द्वीपसमूह बनेको छ।
बारम्बार आवर्ती यात्रुहरूले कुकालाई "एल कैमन" वा "एल कोकोड्रिलो" भनेर सम्बोधन गर्छन्, मुख्यतया यो हवाई दृश्यबाट हेर्दा यसको आकार जस्तो देखिन्छ।
यसको क्षेत्रीय विस्तारको कारण, क्युवा क्यारिबियनमा सबैभन्दा ठूलो टापु मानिन्छकिनकि यसले ११०,110.860० किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ।
त्यो मात्र होईन, क्युबामा ११ करोड भन्दा बढी बासिन्दाहरू छन् जसले क्यारेबियनमा दोस्रो सर्वाधिक जनसंख्या भएको टापुको साथै सम्पूर्ण विश्वमा १teen औं सर्वाधिक जनसंख्या भएको टापु बनाएको छ।
अर्को क्युवाको चाखलाग्दो तथ्य यसको पहिलो बासिन्दाहरू अमेरिकी भारतीय हुन् जसलाई सिबनी भनेर चिनिन्थ्यो। तिनीहरू दक्षिण अमेरिकाबाट बसाइँ सरेका थिए, जबकि तानो इस्पातियोलाबाट ईस्वी दोस्रो शताब्दीतिर आइपुगेका थिए र युरोपियनहरू पहिलो पटक आइपुग्दा क्युबाको पश्चिमी भागमा रहेका गुआनाजाताबे।
क्रिस्टोफर कोलम्बस अक्टोबर २ 28, १ 1942 .२ मा क्युवाको उत्तरपूर्वी तटमा आइपुगे, यो होग्वान प्रान्तको बार्इ भनेर चिनिन्छ। त्यो क्षणमा, कोलम्बसले स्पेनको नयाँ किंगडमको लागि क्युबा टापु दावी गरे.
यद्यपि यस बारे कुनै निश्चितता छैन, यो विश्वास गरिन्छ कि क्युबाको नाम तान्नो भाषाबाट आएको हो। तपाईंको नजिकको अनुवाद हुन सक्छ "ठाउँ जहाँ उर्वर भूमि प्रशस्त छ" (क्यूबाओ) वा "महान ठाउँ" (कोआबाना) क्रिस्टोफर कोलम्बसले पोर्चुगलको स्युडाड क्युबाको नाममा क्युबाको नाम राख्ने विश्वास गरिन्छ।
बार्कोआमा पहिलो स्पेनिश बस्ती सन् १go११ मा डिएगो भेलेक्ज डे कुललरले स्थापना गरेका थिए।
ला हबाना यो क्युबामा सब भन्दा बढी जनसंख्या भएको शहर हो २० लाख भन्दा बढी बासिन्दाहरू भएको साथमा, यो क्यारिबियनमा पनि तेस्रो सर्वाधिक जनसंख्या भएको हो। यो क्युबाको राजधानी हो र यो यहाँ छ जहाँ दुबै राज्य र क्युवा सरकारको उच्च निकाय अवस्थित छ।
यस टापुका स्पेनिश कालोनीको रूपमा विकासको कारण क्युबाको मूल जनसंख्या द्रुत रूपमा घट्यो, बिरामीको परिणामको रूपमा, साथै अर्को शताब्दीमा रहेको कठोर अवस्थाको रूपमा।
चिनी उखु र कफीको बगैंचामा काम गर्नको लागि धेरै संख्यामा अफ्रिकी दासहरू क्युबामा ल्याइएको थियो। नतिजा स्वरूप, हवाना पेरु र मेक्सिकोबाट स्पेन यात्रा गर्ने कोषहरू सहित वार्षिक फ्लीटहरूको लागि लन्च प्याड भयो।
१uba 1898 until सम्म क्युवा एक स्पेनिश उपनिवेश बनेको थियो, जबकि १ different five1845 र १ 1898 XNUMX between बीचमा पाँचवटा विभिन्न राष्ट्रपतिहरूले टापु किन्न प्रयास गरे। वास्तवमा, राष्ट्रपति McKinley क्युवा किन्न 300०० मिलियन डलर प्रस्तावसन्‌ १ 1898 XNUMX Spanish को स्पेनिश-अमेरिकी युद्धको दौडान अमेरिकीहरूले आक्रमण गर्नु भन्दा ठीक अघि।
क्युबाले स्पेनको अमेरिकी युद्धमा स्पेनको पराजय पछि यसको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो। पेरिस सन्धिको तथ्य र धन्यवादको बावजुद, संयुक्त राज्य अमेरिकाले जनवरी १1899 1902 the मा टापुको संरक्षकको रूपमा छोडियो र १ XNUMX ०२ सम्म यसको नियन्त्रण लामो भयो।
क्युबाको बारेमा अधिक जिज्ञासु तथ्यहरू
हामी लेखलाई चार संग समाप्त गर्नेछौं क्युबाको बारेमा जिज्ञासु तथ्यहरू जुन तपाइँले थाहा पाउनुपर्दछ:
१ 1959 XNUMX In मा, फिडेल कास्ट्रो त्यस दृश्यमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको विद्रोही सेनाको एक मुख्य अंशको रूपमा देखा पर्दछ जुन अन्ततः उनीहरूलाई विजयी तुल्याउने छ। त्यस क्षणदेखि, फिडेल कास्त्रोको तानाशाही सरकार February० बर्षसम्म रहनेछ, फेब्रुअरी २०० until सम्म, जब उनी स्वास्थ्य जटिलताका कारण उनको पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए।
संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति ड्वाइट डेभिड आइसनहवारले १ 1960 in० मा क्युवाली शरणार्थीहरूको समूहलाई सशस्त्र तालिम दिने सीआईएको योजनालाई अनुमोदन गरे। क्यास्ट्रो सरकारलाई उखाल्नुहोस्। सुंगुरहरूको प्रसिद्ध खाडी आक्रमण अप्रिल १ 14, १ 1961 1.400१ मा भएको थियो। त्यतिखेर करिब १,XNUMX०० क्युबाली शरणार्थीहरू सुंगुर खाडीमा अवतरण गरे, तथापि उनीहरूले सरकारलाई उखेल्न खोज्ने प्रयासमा असफल भए।
क्युवामा, १ citizens बर्ष भन्दा माथिका र फौजदारी अपराधको अभियोग नलिएका सबै नागरिकले मतदान गर्न सक्दछन्। क्युवामा पछिल्लो चुनाव फेब्रुअरी,, २०१ 16 मा भएको थियो, अर्को चुनाव २०१ in मा भइरहेको थियो।
हाल क्युवामा शासन गरिरहेका राउल कास्त्रोले आफ्नो वर्तमान-बर्षको अवधिको अन्तमा २०१ 2018 को लागि पद छोड्ने घोषणा गरे।
के तपाईंलाई बढी थाहा छ? क्युबा को जिज्ञासु तथ्यहरु हामीले तपाईंलाई भनेको कुरामा के थप्न सक्छौं? हामीलाई तपाईंको अनुभव बताउनुहोस् र क्युबाको बारेमा यो जानकारी विस्तार गर्न हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » क्यूबाको बारेमा जानकारी
क्रिस्टोबल कोलोन १ 1492 1942२ मा क्युबा आइपुगे, हहाहा, बधाई
मरियमलाई जवाफ दिनुहोस्
२०१२-२० टिभी अवधि सबैभन्दा कठिन र अनगिन्ती वर्ष बन्नको लागि आकार दिँदैछ। त्यहाँ आश्चर्यजनक, प्रारम्भिक पाइलटहरू आउँदै छन् र मात्र धेरै रिबुटहरू / रोजगारमा पुन: जीवनका रूपमा आउँछन्। यद्यपि दावी गयो जस्तै, "पुरानोसँग बाहिर, ब्रान्ड-नयाँसँग।" जबकि केही संग्रह पूर्व योजनाबद्ध, राम्रो सन्तुलित उच्च नोटमा समाप्त हुँदैछ, विभिन्न कार्यक्रमहरूको जीवनकाल वास्तवमै छोटो विकासमा कम गरिएको छ। त्यसोभए, दुर्भाग्यवस, तल सबै टेलिभिजनहरूको सूची हो जुन तपाईं यस बर्षमा विदाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ।
Putlockerykam लाई जवाफ दिनुहोस्
क्यारिबियन क्षेत्र को विशिष्ट पकवान